I-Muscovite ikwabizwa ngokuba yi-mica eqhelekileyo, i-matslass, okanye i-potash mica -Vidiyo
Thenga i-muscovite yendalo kwivenkile yethu
Muscovite eyaziwa ngokuba mica eqhelekileyo, isinglass, okanye mica umanyolo yinto phyllosilicate bezimbiwa hydrated ye-aluminiyam kwaye potassium. Inesalfaa ecocekileyo esemgangathweni ene-laminae ethe tye exhaphakileyo exhaphakileyo.
Muscovite has a Mohs yobulukhuni 2-2.25 ngaxeshanye ngokusekuhleni, 4 aa Incopho na kunye nobungakanani ngqo 2.76-3. Inokuba ngombala okanye iitayile ngokusebenzisa i-grays, brown, greens, yellows, okanye kunqabile ukuba ibe nobomvu okanye ibomvu, kwaye inokubonakala okanye ibonakale. Kuyinto ye-anisotropic kwaye ine-birefringence ephezulu. inkqubo yalo crystal yi monoclinic. Olu luhlaza, i-chromium enobutyebi obahlukeneyo babizwa ngokuba yi-fuchsite; mariposite naye uhlobo chromium-otyebileyo muscovite.
I-Muscovite yeyona mica ixhaphakileyo, efumaneka kwii-granites, i-pegmatites, i-gneisses, kunye ne-schists, kwaye njengendawo yokudibana ye-metamorphic rock okanye njenge-mineral yesibini ebangelwa yinguqu ye-topaz, feldspar, kyanite, njl. Kwi-pegmatites, ihlala ifumaneka kwi amaphepha amakhulu abalulekileyo kurhwebo. Le sstone zifunwa ukulungiselela ukwenziwa fireproofing kunye izinto zokwambathisa ezikhoyo kwaye kwisithuba nje igrisi.
Igama elithi muscovite livela kuMuscovy-iglasi, igama elinikwe amaminerali e-Elizabethan England ngenxa yokusetyenziswa kwayo kwi-Russia yamandulo njengeyona ndlela ishibhile kwiglasi kwiifestile. Oku kusetyenziswa kwaziwa kakhulu eNgilani ngenkulungwane yeshumi elinesithandathu ngokuchazwa kwayo okokuqala kwiileta nguGeorge Turberville, unobhala wenxusa laseNgilani kwi-tsar Ivan the Terrible, ngonyaka ka-1568.
I-Muscovite ilawula iswekile yegazi, i-balances pancreatic secretion, ukunciphisa ukungabikho komzimba kunye nokukhusela indlala ngelixa lokuzila. UMthetho izintso. Iyakunciphisa ukuqaqanjelwa sisisu kunye ne-allergies kwaye iphilise naziphi na iimeko ezibangelwa kukungakhathali okanye uxinzelelo.
Eli litye likhuthaza uthando olungenamiqathango, ukuvula intliziyo yokwabelana kunye nokukunceda ukuba wamkele ukungafezeki kwabanye abantu. Ngokuyenza, yinto ilitye elihle ukuba unesifo dyspraxia kwaye unengxaki okuthile nochuku ekhohlo-ekunene.